အမှိုက်ကရွှေဖြစ်မဖြစ်တော့ မသေချာ ၊မြောင်းကိုမှီပြီး ဆီထုတ်လို့ ရသတဲ့ … | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Critic » အမှိုက်ကရွှေဖြစ်မဖြစ်တော့ မသေချာ ၊မြောင်းကိုမှီပြီး ဆီထုတ်လို့ ရသတဲ့ …
အမှိုက်ကရွှေဖြစ်မဖြစ်တော့ မသေချာ ၊မြောင်းကိုမှီပြီး ဆီထုတ်လို့ ရသတဲ့ …
Posted by etone on Jun 13, 2012 in Critic, Food, Drink & Recipes, Health & Fitness | 35 comments
etone ဘ၀ တစိတ်တပိုင်း အကြံပက်စက် လုပ်ရက်သူများ
ဟိုးတလောက(ကြာတော့ကြာပြီ) အီးမေးလ်ထဲကနေ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖတ်ခဲ့ရတယ် …. တရုတ်နိုင်ငံမှာ လမ်းဘေးရေဆိုးရေညစ်တွေနဲ့နောက်ဖေးလမ်းကြားက ထမင်းဟင်းကျန်တွေကနေ ကြိုချက်ပြီး အဆီပြန်ချက်ယူတဲ့ သတင်းပါပဲ …ဓါတ်ပုံနဲ့ တကွပြုလုပ်ပုံအဆင့်ဆင့် ပါတာကြောင့် အကြံပက်စက်လေချင်းဆိုပြီး … အော့နှလုံးနာခဲ့မိပါတယ် ။ အဲ့ဒီလို ညစ်ပတ်နေတဲ့ ရေဆိုးမြောင်းတွေထဲက စစ်ယူပြီး… ကြိုချက်ထားတဲ့ အမှိုက်တွေထဲက ဆီတွေ ၊ ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့ ဈေးကွက်ထဲ ပါကင်ကောင်းကောင်းနဲ့ ရောက်နေမလားလို့လည်း စိတ်ပူမိခဲ့ပါသေးတယ် အဲ့ဒီဆီတွေက အကြော်ခံပြီးပုံးလိုက်ရောင်းတာမျိုးလို့ လည်း အဲ့ဒီမေးလ်ထဲရေးထားတာ ဖတ်လိုက်ရသေးတယ် … ။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့်လည်း သက်သာတယ်ရေးထားပေးမယ် … ဘယ်လောက်ဈေးရှိသလဲဆိုတာ ရေးသားထားခြင်းမရှိပါဘူး … အဲ့ဒီစာဖတ်ပြီးကတည်းက တရုတ်ကအဖြစ်ပျက်ပေမယ့် … အပြင်စာတွေစားတိုင်း ဆီသန့်ရဲ့လားဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးနဲ့ ဇီဇာကြောင်ခြင်းတွေ ကျွန်မကိုယ်ထဲ စွဲကပ်လာခဲ့တယ် … ။
သုံးလလောက်ကြာတော့ … ဆီသန့်မသန့် ဇီဇာကြောင်တဲ့စိတ် မေ့မေ့ပျောက်ဖြစ်နေတုန်း…. တစ်ရက်မှာ ရယ်ဒီမိတ် ဘာလချောင်ကြော်တစ်ထုတ်ဝယ်စားမိပါတယ် …. တထိုင်တည်းစားရင်း လေးငါးလုတ်အပြီှးမှာတော့ လျှာပေါ်စေးကပ်ကပ်ခံစားမှုမျိုးဖြစ်လာခဲ့တယ် …. ။ စားခါစကတော့ သံသယမရှိပါဘူး … ကြွတ်ရွတဲ့ခံစားမှုနဲ့ မွှေးပျံ့ တဲ့ အနံ့ တွေကြောင့် နာမည်လည်းမရှိ…exp လည်းမပါပေမယ့် ….. တန်ကြေးပေးပြီးဝယ်စားမိပါတယ် ။ ကြာတော့စေးကပ်လာတဲ့လျှာပေါ်ကခံစားမုက … ဆပ်ပြာဝါးနေရသလိုမျိုးချည်း ခံစားလာရတယ် … ဒီအစားသောက်ထဲတော့ ဆပ်ပြာပါမယ်မထင်ဘူး…. ကိုယ့်စိတ်ကပဲ ထင်နေတာများလား တကယ်လားလုိ့သေချာအောင် အိမ်ကလူတွေကိုလည်း စားခိုင်းကြည့်တော့ … သူတို့လည်း ဒီလိုခံစားရကြောင်းပြောပါတယ် … ဒီလိုပါပဲ သူတို့လည်း အစားသောက်ထဲတော့ ဆပ်ပြာထည့်မယ်မထင်ကြဘူးလေ …. အရသာကတော့ ဆပ်ပြာအရသာမို့နောက်ဆုံး အားလုံးဝိုင်းတွေးကြတာ ဆီကြောင့်ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြေမျိုး တညီတညာထွက်ခဲ့ပြန်တယ် ….။ ဈေးကွက်ထဲက တချို့သော ဆီတွေ မခဲအောင် ဆပ်ပြာမှုန့်ထည့်သုံးတယ်ဆိုလား ဘာလား…. အဲ့ဒီကြားခဲ့ဖူးတာလေုးပြန်တွေးရင်း …. ကြက်သီးမွှေးထမိသွားပါတယ် …. ။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်ကျော်ကလည်း … ကိစ္စတစ်ခုကြောင့် သူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့ချိန်းရင်း လှိုင်သာယာက မန်းမြို့တော်ပေါက်ဆီဆိုင်မှာ ထိုင်ဖြစ်ခဲ့တယ် …. ။ လ္ဘက်ရည်သောက်ပြီးအပြန်မှာမန်းမြို့တော်ဆိုင်ရဲ့ ဘေးဘက်က အမှိုက်တွေနဲ့ ရွံ့ မဲတွေပြည့်နေတဲ့ မြောင်းမှာ လူတယောက် မရွံမရှာ ကုန်းနှိုက်နေတာတွေ့တော့ …. အမှိုက်ကောက်တဲ့လူများ …. ရေထဲနစ်နေတာတောင် မရွံမရှာ လုပ်စားရတယ်ပါးစပ်ကလည်းရွတ်ပြီး….. ကရုဏာသက်နေမိသေးတယ် …ကျွန်မရေရွတ်သံကိုကြားရတော့မှ …ငြိမ်နားထောင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းက … အဲ့ဒါအမှိုက်ကောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ … ဆီထုတ်မလို့ဆိုပဲ ….. ။ ကြားရတာတောင် မယုံချင်လောက်အောင်ပါပဲ ……. ကျွန်မသိခဲ့ဖူးတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက ရေမြောင်းထဲက ဆီထုတ်သလို ၊ ထုတ်စားတော့မယ်တဲ့လေ …. ။ စိတ်ပူနေတဲ့ကိစ္စက တကယ်ဖြစ်လို့လာပါပြီ … ဒါကြောင့် ကျွန်မသိသလို တခြားလူတွေကိုလည်း သိစေချင်တာကြောင့် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖို့ ကြိုးစားပါတယ် … ပထမအကြိမ်မအောင်မြင်ပါဘူး … ဒါပေမယ့် … မန်းမြို့တော်နားက ဖယ်ရီဖြတ်တိုင်း … အခွင့်သာမယ့်အချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့တာပါ …. ။
သိပ်တောင်မစောင့်လိုက်ရပါဘူး …ဒီနေ့တော့…. ဟိုလူပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ် မြောင်းနှိုက်နေတာထပ်တွေ့လို့ ဖယ်၇ီပေါ်ကဆင်းပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဓါတ်ပုံဆင်းရိုက်မိပါတယ် … အခုလိုတွေ့ရတော့တာပါပဲ …. ။ ဘယ်မှာ ဆီချက်မှာလဲ ၊ ဘယ်သူတွေကို ပြန်ရောင်းမှာလဲဆိုတာကတော့ … မေးကြည့်ချင်ပေမယ့် .. ဓါတ်ပုံတောင် ခိုးရိုက်ရတဲ့အနေထားမို့ မေးမကြည့်ခဲ့မိပါဘူး … ။သူဆီစစ်ယူနေတဲ့အနေထားက … ကျွန်မ အီးမေးလ်ထဲကနေကြည့်ဖူးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်း ဆင်နေလို့ …မယုံချင်ပေမယ့် … ဆီထုတ်ဖို့ ကြိုးစားနေတာလို့ … မြင်မိပါတယ် ။ ရွာသူရွာသားတို့ရော ကျွန်မနေရာမှဆို …. သူဘာလုပ်နေတယ်လုိ့ ထင်မလဲဟင် …. ။
လူတွေလောဘစိတ်နဲ့ အတ္တစိတ်ပြင်းထန်တဲ့အခါ လူစိတ်ပျောက်လာတတ်တဲ့အကြောင်း လက်ခံထားသူမို့ … ကိုယ်ကောင်းစားဖို့ ၊ ကိုယ်ချောင်လည်ဖို့ .. လုပ်သင့်လားမလုပ်သင့်လား နားမလည်ပဲ …ဘာမဆို လုပ်မယ့် လူသဏ္ဍန်သတ္တ၀ါတွေရှိတယ်ဆိုတာ … ယုံကြည်ပါတယ် ။ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာ အစားသောက်နဲ့ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနရဲ့ ထောက်ခံချက်မပါပဲ … ခွင့်ပြုမိန့်အမှတ်သားမပါတဲ့ တချို့သောစားသောက်ကုန်တွေ ၊ ဆိုင်ပေါ်ရောက်နေတာ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်ရမှန်း မသိတော့ပါဘူး ။ တန်ကြေးပေးပြီး ၀ယ်စားရတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေ လိပ်ပြာသန့်သန့်မျိုကျကျ စားချင်ပါတယ်…. ဈေးကွက်ထဲ အုတ်ရောရော ၊ကျောက်ရောရော ရောင်းချနေတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေကို ရှောင်တခင်ဝင်ပြီး … ထိထိရောက်ရောက် စစ်ဆေးတာမျိုးရှိသင့်ပါတယ် ။ အ န္တရာယ်ဖြစ်စေမယ် အသုံးပြုမှုတွေ ၊ ပစ္စည်းပါဝင်မှုတွေတွေ့တဲ့အခါ ၊ မျက်နှာမလိုက် လာဘ်မစားပဲ …. တားမြစ်သင့်တာ တားမြစ်သင့် ၊ အရေးယူသင့်တာ အရေးယူသင့်ပါတယ် ….. ဒါမှသာ အစားသောက်လိုနေ့စဉ်ပြုမူနေရတဲ့ ကိစ္စမျိုးကရလာမယ့် …. ဘေးဥပဒ်တွေ ၊ရောဂါဖြစ်ပွားမှုတွေ အထိုက်လျောက်ကာကွယ်နိုင်မှာပါ ….. အဲ့လိုမှ မဟုတ်လျှင်တော့ …. ပါးစပ်ကို ပလာစတာကပ်ရင်း ကိုယ်တိုင်ဆန်စိုက် ၊ ကိုယ်တိုင်ဆီဖွတ်စားရမယ့် အခြေနေမျိုး ပြန်ရောက်လေမလားလို့ … တွေးလို့တောင် ရင်မအေးနိုင်ဖြစ်ရပါတော့တယ် …. ။ ။
ဒါကတော့ ရေမြောင်းထဲမှာ ပိတ်စပါးကို ဖြန့်ခင်းပြီး ကပ်လာတဲ့ ဆီတွေရော ၊ ရေညစ်တွေကိုရောဒီပုံးထဲ ညစ်ထည့်တာပါ ... ။ လစ်တုန်းလေး မြန်မြန်၇ိုက်ခဲ့ရတယ်
ခပ်ဝေးဝေးကပဲ ရိုက်ရဲပါတယ် ... ပြေးလို့ရအောင်လေ ..ဟိဟိ ... မယောင်မလည်နဲ့ အနားတော့ကပ်ကြည့်ခဲ့ပေမယ့် ... ဓါတ်ပုံတော့ အနားကပ်မရိုက်ရဲဘူး ... ဟီး
ပြည်သူားတွေ ကျန်းမာရေးအတွက် စီဂျေ အိတုန် အိ ရိုက်ချက်… ပေါ့ဗျာ ။
အခုလို ဓါတ်ပုံနဲ့ အတူ သတိပေးလာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ ။ အရင်က ဂျာနယ်တစ်စောင်မှာ ဖတ်ဖူးခဲ့တာ က ၊ ရန်ကုန်က မြို့ သစ်တွေမှာ ၊ ဟင်းချက်ဖို့ ဝယ်လာတဲ့ ဝက်သား ၊ ငါး က ပါတဲ့ အဆီတွေ ကို ဆီအဖြစ် ချက်ပြီး ၊ ရက်ကွက် ထဲမှာ ပြန်ရောင်းတယ် လို့ ဖတ်ခဲ့ဖူးတာပါ ။ ငါးကနေချက်ရောင်းတဲ့ ဆီ က ဝက်ကနေချက်ရောင်းတဲ့ ဆီ ထက် ဈေးနဲနဲပိုပေးရပါသတဲ့ ။ တစ်နေ့ လုပ်မှ တစ်နေ့ စားရတဲ့ အခြေခံ လူတန်းစားတွေ အတွက်ကတော့ ၊ ဆမ်းလိုက်ရင် ငါးအနံ့ လေး ၊ ဆမ်းလိုက်ရင် ဝက်အရသာလေးနဲ့ မို့ ၊ အဲဒီဆီတွေဟာ ဈေးကွက်တစ်ခုရှိပါသတဲ့ဗျာ ။
သူများ စီးပွားရေး ဒုတ်နဲ့ထိုးတဲ့
မန်းဂဇက်က အီးတုန်ကို လမ်းမှာတွေ့ရင် ရိုက်ကြပါဗျို့…။
ကျွန်တော်တို့လဲ အဲလိုဆီတွေဘယ်နှစ်ပိသာလောက် စားမိနေပြီလဲမသိ
သတင်းထောက်ကြီး ဒေါ်အီးပုံး ရှဲရှဲပါ
စီဂျေ အီးတုံးအား ချီးကျူးအပ်ပေ၏
ဖြစ်နေတာ ကြာပီဟု သိထား၏
တရုတ်နိူင်ငံ နယ်မြို့များတွင် ထိုကိစ္စကို လစ်လျူရှုထား၏
စားသောက်ဆိုင်များမှာ စားကြွင်းးစားကျန်များအား လှည်းနှင့်တမျိုး ကားနှင့်တဖုံ သီးသန့် စုဆောင်းကာ ဆီပြန်လည် ချက်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းရှိ၏
သူတို့ပြန်ချက်သော ဆီကို သီးသန့် ဈေးကွက်တစ်ခု တင်ကာ ပြန်ရောင်း၏
ပုံထဲကလို မြောင်းထဲကတော့ ပြန်မနှိုက်ကျ၏
တရုတ်တွင် အမှိုက်သိမ်းစနစ် ကောင်း၏
ရေဆိုးရေညစ် များအားလုံး အိမ်သာပိုက်လိုင်းထဲသို့ သွား၏
မြန်မာပြည် တရုတ်ကို ဘာမှ အားမကျရင်တောင် အမှိုက်သိမ်း စနစ်နှင့် အမှိုက်ပစ် စနစ်ကို အဖွဲ့စည်းများနှင့် ပြည်သူကိုယ်တိုင် လိုက်နာကျင့်သုံး စေလို၏
ကျွန်တော်သာ ma etone နေရာမှာဆိုရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ဖို.တော. မသေချာဘူး၊ ဘာလုပ်ဖို.လဲဆိုတာတော. သေချာ မေးကြည်.ချင်တယ်။ အနားတောင် ကပ်ကြည်.ပြီးမှတော.။
ster ရေ .. အဲ့အချိန်က အနားကပ်သွားပြီး မေးဖို့ထက် .. .ဓါတ်ပုံရိုက်နိုင်အောင် တပတ်လောက် စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ အချိန်တွေကိုပဲ ..စိတ်ထဲရှိနေမိတယ် … ။ သူငယ်ချင်းကလည်း ဆီချက်ဖို့လို့ .. ပြောထားတာကြောင့်ရယ် ၊ ကိုယ်ဖတ်ဖူးတဲ့ မေးလ်ထဲက အကြောင်းရာနဲ့ ဆင်နေတာကြောင့်ရယ် .. သံသယမ၀င်ပဲ ယုံလိုက်မိတယ် …… ။
နောက်ပြီးသူ့ရဲ့ …. အပြုမူက … မြောင်းထဲ ဆီစစ်သလို ပိတ်ပါးနဲ့ စစ်ပြီး အပေါ်ယံက ကျန်တဲ့ ဆီတွေကို ပုံးထဲ ညှစ်ချနေတာဆိုတော့ … ။
အနားကပ်ပြီး သွားမေးလျှင် ဓါတ်ပုံ၇ိုက်ခွင့်ဆုံးရှုံးမယ်လို့လည်း …ထင်ထားခဲ့မိလို့ပါ ….. ။
ဒါ့ကြောင့်ထင်တယ်၊ တနေ့က ဆီကုန်လို့ ဈေးထဲဆီသွားဝယ်တာ ဆီဈေးကျသွားတယ်ဆိုပြီး ၀မ်းသာနေတာ
အဲ့အမှိုက်ဆီတွေ ရောထားလို့လားမသိ အိ! :?
အစားသောက်နဲ့ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဌာနက ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် မလုပ်နိုင်သေးသရွေ့တော့ စားသုံးသူတွေအတွက်ပဲ စိုးရိမ်မိပါတယ်။
မအိတုံကတော့ လက်တွေ့ ဆန်ဆန်နဲ့ ရအောင်ကို ယူတတ်၊ပညာပေးတတ်ပါပေတယ်ဗျ
ဒါကြောင်.ပြောတာ ….ရီဆိုင်ကယ် လို.ဆိုရင် မြန်မာပြည်က တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုအေးဆေးဘဲ ။
ကဲ ကဲ ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ။ သိပ်မပျံ.သေးဘူးဆိုပေမဲ. နောင်ဆို တနိုင်တပိုင် လုပ်လာကြတော.မယ် ။
နောက်တစ်ခါတွေ့ရင် အင်တာဗျူးကြည့် ပါလား။
ကြည့်ရတာ စီးပွါးဖြစ်အကြီးအကျယ် လုပ်နေတာ ဟုတ်ပုံရပါ့မလား လို့ တွေးမိတယ်။
အဲဒီ ပုံး ကို ပြန်ကျို ရင် ရလှ နဲနဲ ဘဲ ဖြစ်မလားလို့။
သူ့အိမ် မှာ သုံးဖို့ များလား။
အနဲ ဆုံး တို့ပြည်က လူတွေ တစ်ဝမ်းတစ်ခါး အတွက် ဘယ်လို ရုန်းကန်နေကြရတယ် ဆိုတဲ့ သရုပ်မှန်တွေ မြင်ရလို့။
အမှန်က တကဲ့ကို ဝမ်းနဲစိတ်မကောင်းစရာ မြင်ကွင်းဘဲ။
ညစ်ညစ်ပါတ်ပါတ် နဲ့ လုပ်နေရသူ အတွက် လဲမကောင်း၊ ပြန်သုံးရမဲ့ သူအတွက်လဲ မကောင်း။
ပိုက်ဆံ ရဖို့ (ဒါမှမဟုတ်) ထမင်းစားရဖို့ ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်မယ် ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်နေပြီ။
အစိုးရမှာလည်း တာဝန်ရှိသလို ပြည်သူတစ်ဦးချင်းလည်း အသိတရားတွေရှိဖို့လိုတယ်…
ဘ၀ရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ အတွက်တကယ်ခက်ခဲ ပြီဆိုတော့လည်း ကျန်မားရေးထိခိုက်တာ မထိခိုက်တာ ဘယ်မြင်တော့မလဲ? ဒီလိုလူတွေကို ကျတော့ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတွေရအောင်ကူညီ စောင့်ရှောက်
နောက် စားမကုန်သုံးမကုန်တဲ့ ၀ိသမလောဘသားတွေ အတွက်ကတော့ အစိုးရက စီမံကွပ်ကဲပြီး
အဲ့ဒါ ရပ်ကွက် အဆင့် မြို့နယ်အဆင့် …
ထိန်းလို့ ချုပ်လို့ ရသင့်တဲ့ ကိစ္စပဲဗျာ …
အုပ်ချုပ်ရေးမူး ဆိုတဲ့လူတွေ …
ရပ်မိရပ်ဖ ခေါ်တဲ့လူဒွေ …
ကိုယ့်ရပ်ကွက်ထဲ မြောင်းလာ နှိုက်နေရင်…
မေးရမြန်းရမယ့် ထိန်းရသိမ်းရမယ့် အနေအထား ထင်တာပဲ….
ဆင်းရဲတာ က ဆင်းရဲတာပဲ …
ကိုယ် ထမင်းဝဖို့ ..ကိုယ့်လူမျိုးကိုယ် ပြန်သတ်တဲ့ အလုပ်
လုပ်တာကို ခွင့် မပြုနိုင်တာ ကတော့ လူတိုင်း အ၀ဲယားနက် ရမယ့် ကိစ္စ ပဲ..
ရေသန့်ဗူး ထည့်ကြော်တာ တွေ ကန်စွန်းရွက် မျှစ် နဲ့ ငါးပိ ဆေးဆိုးတာတွေ
အရက်အတု ထုတ်တာတွေ … ရေလည် ချဉ်တယ်…
ဒါမျိုးတွေက များများဖော်ထုတ် များများ လူသိအောင် လုပ်ပြီး
ဆင်ခြင်အောင် နောင်ကျဉ်အောင် လုပ်ရမယ့် ကိစ္စ လို့ပဲ တွက်မိပါရဲ့ဗျာ..
လက်မ (အမှန်အကန်) ထောင်သွားပါဂျောင်း…
ဓာတ်ပုံကို ရအောင် ရိုက်ယူလာခဲ့နိုင်တယ်။
ကိုယ်တိုင်တော့ ဈေးသည်ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တော့မှပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ရတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲသလဲဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်။
အကျိုးများမယ့် ပိုစ့်လေးတွေတင်တတ်တဲ့ အီတုံးရဲ့ စတိုင်ပေ့ါ။
တွေ့ကရာ စားတတ်တာမို့ အပြင်စာ စားဖို့ကို ကြောက်တောင်လာမိတယ်။
ဆက်စပ် တွေးရင် ဒီလို လူမျိုးတွေ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ .. သူတို့ က ရလှ နဲနဲ .. ဒါဘာပြန်လုပ်လဲဆိုတာကော သူတို့ သိရဲလားဆိုတာက မေးခွန်းတစ်ခု ..
ငါပိုက်ဆံပေးမယ် .. ဒါတွေ ဒီလို စုခဲ့ ..တစ်ပုံးဘယ်လောက်ပေးမယ်ဆိုပြီး
အခုလိုခပ်ခိုင်းခပ်နေတဲ့ သူ များစွာဆီက ပြန် စုဆောင်းပြီး ပြန်ချက် ဖြန့်ဝေ သူကို သေဒါဏ်ပေးရမှာ..
ပုံရဲ့အောက်မှာ ခရမ်းရောင်လေးနဲ့ ရေးထားတဲ့ စာလုံးသေးသေးလေးဂ
ဒေါက်တာရဲ့ ဆိုဒ်လား ဒေါက်တာ
အဘပုပြောမှပဲ ကြည့်မိတယ် … ဘယ်ကစာတွေ ကပ်ပါလာပါလိမ့်နော် ……. ။
မနေ့ညက … ဖိုတိုရှော့ထဲကနေ ဖိုင်ကို ဆိုဒ်လျော့ပြီး ဒီတိုင်းတင်လိုက်တာပဲ ……. ဘာကြီးက အောက်မှာပါသွားမှန်း မသိဘူး ။
ဘာဂျီးမှ မဟုတ်ဝူး …
အဂ္ဂမဟာ ဒီမိုသဂျီး ရဲ့ ၀ါးတားမာခ့် ရေစာ…
ဘယ်ပုံတင်တင် အဲ့လာဂျီး အော်တို ပြေးကပ်တယ်..
ပိစိလေး တင်ထားတာ..မို့ သေချာ မမြင်ရဒါ
နဲနဲလျှာရှည်လိုက်ဦးမယ် .. သူ့ကိုပိုပြီး ၀င်ငွေကောင်းနိုင်မဲ့ နေရာညွှန်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ် .. :grin:
ဆီဒိုးနား ဟိုတယ်တို့ . ထရိတ်ဒါးဟိုတယ် တို့လို့ ဟိုတယ်ကြီးများမှာ restaurant ကထွက်လာတဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့ စွန့်ပစ်ရေ က မြောင်းထဲကို တိုက်ရိုက်မစွန့်ထုတ်ရပါဘူး ။ Grease Trap ဆိုတဲ့ ဆီတွေဖမ်းတဲ့ ကန်လေးကိုဖြတ်ပြီးမှ ထွက်ရတာပါ ။ အဲ့ဒီ့ဆီတွေက grease trap ထဲမှာအေးခဲပြီး အစိုင်အခဲများအဖြစ် ကျန်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲ့ဒီ့ အစိုင်အခဲများကိုမှ မိလ္လာကားခေါ် ပြီးစုတ်ထုတ် လွှင့်ပစ်ရတာပါ ။ အဲ့ဒီ့ကို လမ်းညွှန်လိုက်မှနဲ့တူတယ် ။
etone ပြောတဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာ လုပ်တာဆိုတာ အဲ့ဒါမျိုးတွေ လိုက်စုပြီးလုပ်တာများလားလို့။
စကာင်္ပူလိုနိုင်ငံ ဟိုတယ်တွေများတဲ့ စားသောက်ဆိုင်တွေများတဲ့နိုင်ငံဆို အဲ့ဒီ့ grease trap ကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေ ရှိတယ်လေ ။ အဟိ .. သူတို့ကော ပြန်များထုတ်နေလားမသိ။
ဂျပန်နိုင်ငံမှာတော့ စားသောက်ဆိုင်များမှ အသုံးပြုပြီး သွန်ပစ်ရမဲ့ဆီတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်းပြီး ကားတွေမှာ လောင်စာ အဖြစ်ပြန်အသုံးချရအောင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲတယ်လို့ မှတ်သားမိကြောင်းပါ။
ကိုထူးဆန်းရေ … ကျွန်မမေးလ်ထဲဝင်ခဲ့ဖူးတဲ့ တရုတ်က ဆီပြန်ချက်တဲ့ပုံက … အဲ့လို စနစ်တကျမဟုတ်ဘူးပဲ …. ဟင်းကျန်ဆီတွေရယ် ၊ ပန်းကန်ဆေးတဲ့မြောင်းလိုကရတဲ့ အမှိုက်နဲ့ ဆီရောတာတွေကို … အိုးတလုံးထဲ မီးမြှိုက်ရတာမျိုးပါ ..ပြီးမှ အပေါ်ကဆီကို ခပ်ထုတ်ပြန်ကျိုတာမျိုး …. ။ မေးလ်ဟောင်းကို ပြန်ရှာနေပါတယ် … တွေ့လျှင် ပို့ပေးပါဦးမယ် … ။
အောင်မယ်လေး ခေါင်းထဲမှာရော ရင်ထဲမှာပါဒိန်းကနဲ့ပဲ။ လုပ်ရက်လိုက်ကြတာ။ ဘယ်လိုဆီမျိုးရွေးစား ရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ လမ်းဘေးအကြော်တွေ ရေသန့်ထဲ့တယ်ဘာတယ်ဆိုတုန်းက အိမ်မှာပဲဆီသန့် တယ်ဆိုပြီး အိမ်မှာပဲအကြော်ကြော်စားတာ။ အခုတော့အိမ်ကဆီပါမသန့်တော့ဘူး ဆိုတော့ မြတ်စွာဘုရား။ ကြည့်ရတာ အဲလူကတော့ဆီထုပ်နိုင်မဲ့ပုံမရှိဘူး။ နောက်ကွယ်မှာ အဲလိုလူတွေဆီက ဆီဆိုးတွေ ကို ကောက်ပြီး ဆီထုပ်မဲ့ ၀ိသမလောဘအဖွဲ့ရှိမှာပဲ။ အဲအဖွဲ့ကိုရှာဖွေဖမ်းဆီးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ ထင်တာမမှား ရင် တော့တရုတ်နည်းပညာနဲ့လုပ်တာဆိုတော့ တရုတ်အဖွဲ့ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။ တုန်တုန်ရေ အဲဘက် မှာ နဲနဲတော့မျက်စိဖွင့်နားစွင့်ထားဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ သတင်းရတာနဲ့ အမြန်ဆောင် ရွက်နိုင်အောင်လို့ပါ။
ရေလုံပြုတ်စားဖို့ နှိုးဆော်ပါလားကွယ်… ကြက်မဂျီးနဲ့လည်း ညီညွတ်၊ အကုန်အကျလည်း သက်သာ…။
ကြည့်မြင်တိုင် ၊ သဲကွင်းမှတ်တိုင်နားမှာ ရပ်ထားတဲ့ ဆီကားတွေကို ဖြတ်သွားရင် မြင်လျှင် စူးစမ်းကြည့်ကြပါ … ။ ကျွန်မမြင်တာကတော့ … ဆီတိုင်ကီမှာ ကပ်နေတဲ့ဆီတွေနဲ့ ၊ ဖိတ်စင်နေတဲ့ ဆီတွေကို ရေမြှုပ်ဖော့တုံးသုံးပြီး စုပ်ယူလိုက် … ခွက်နဲ့ ခံပြီး ညှစ်လိုက်နဲ့ လုပ်နေတာ ခဏခဏမြင်ဖူးပါတယ် … ။
အဲ့ဆီကရော ….. အပင်ပန်းခံပြီး ရေမြှုပ်တုံးနဲ့ စုပ်ထုတ်နေတာ ဘာလုပ်ဖို့ပါလိမ့် …
ဟိုပြန်ချက်ထားတဲ့ ဆီထက်စာလျှင် .. ဒီဆီကတော့ .. နည်းနည်း တော်သေးတာပေါ့ … ။
အဲဒါကတော့အိမ်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မယ်။ သူက တော်တော်လေးသန့်တယ်ပြောရမယ်။ မြောင်းထဲ ကဟာကတော့သူ့အိမ်သူစားဖို့တော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။
Email ထဲမှာ ၀င်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဆိုတဲ့ သတင်းလေး ပြန်ရှာတွေ့လို့ … ကူးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် … ဓါတ်ပုံတွေလည်း ပါပြီး မြင်ရတာတော့ ကြက်သီးထစရာပါပဲ ……. Fake news လား … တကယ်လားကတော့ …… ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်မဟုတ်လို့ ……….. အတပ်မပြောနိုင်ပါဘူး … ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မြင်ရတာတော့ အော်ဂလီဆန်တယ် …. :mad:
Fwd: မြောင်းထဲသို့ သွန်ပစ်လိုက်သည့် အစားအသောက် များမှ ဆီများအားစစ်ယူကာဟင်းချက်ဆီအဖြစ် ပြန်ရောင်း…
တန်ကြာက ဖတ်ရှုခဲ့ ရပြီးဘာသာမပြန်ရသေးသည့် သတင်းတစ်ပုဒ်အား ပြန်ဆိုတင်ပြလိုက်ပါသည်…
သည့် အကြောင်းကိုပါ လွန်ခဲ့ သည့် သုံးရက်ခန့် က သတင်းစာတွင်ထပ်မံဖော်ပြခဲ့ ပါတယ်…
တော့ အသေအချာမို့ နိုင်ငံ၏အနာဂတ်ရင်သွေးလေးများအတွက် သတိပြုမိစေရန်တင်ပြအပ်ပါတယ်…
မသန့် တဲ့ ဆီတွေနဲ့ ကြော်ထားလျှင်…
( ဓါတ်ပုံကိုနမူနာအဖြင့် ပြသရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်…အမှန်တကယ်ထိုတံဆိပ်မဟုတ်ပါ…)
ပါသည့် မည်သည့် အသင့် စားသုံးနိုင်သည့် ဆီကြော်မုန့် မျိူးကိုမဆို ရောင်းချခွင့် မပြုသင့် ပါဘူး…)
သည့် အဟာရမဖြစ်သောမည်သည့် မုန့် ကိုမဆိုရောင်းချခွင့် မပြုပါဘူး…
အလကားရတဲ့ ဆီမို့ ရောင်းတန်းဝင်ဆီသန့် များထက်စာလျှင်တော့ ဈေးအပုံကြီးသက်သာပါတယ်…
စားသုံးရန်သင့် တော်ပါတယ် ( ဘေးအန္တရယ်မရှိပါဘူး ) လို့ ပင်အာမခံလိုက်ပါသေးတယ်…
ထိုကိစ္စကိုလွန်ခဲ့ သည့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်ကတည်းကပင် တရုတ်နိုင်ငံတွင် တွေ့ ရှိဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ ပါတယ်…
တွေ့ ရှိသိမ်းဆည်းနိုင်ခဲ့ ပါတယ်….
ထွက်လာလိမ့် မည်ဟု အများစုအနေဖြင့် မထင်မှတ်ထားခဲ့ ပေ…
http://bbs.news.163.com/bbs/photo/153588014.html မှာ ဓါတ်ပုံတွေ သွားကြည့်လို့ ရပါသတဲ့ …. ။
ထပ်ပြောပါမယ် … ဒီသတင်း အစစ်လား .. ဘာလား ညာလားဆိုတာတော့ …. အတပ်မပြောနိုင်ပါဘူး… Fake သာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလျှင် … အားနာစရာတွေဖြစ်ကုန်တော့မှာမို့ .. ကြိုတင်စကားခံထားခဲ့ပါတယ်နော် ….
ဘယ်ဆီကြော်မှ မစားတော့ဘူး..၀ယ်စားစရာလဲ ပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုတော့..ကန်စွန်းရွက်ရေလုံပြုတ် ဟင်းလုပ်လို့ ဆွဲမဟေ့..
etone ရေ.. ဒီအပါတ်ထုတ် မြန်မာတိုင်မ်းထဲမှာလည်း ရေးထားပါတယ် . တရုတ်ကနေ ရှောက်မိုင်းယန့် ၊ တာ့တုံးယုံ၊ဂျင်းလီတံဆိပ် တွေတဲ့ ။ etone ပြောသလို မြောင်းထဲက ပြန်ချက်တဲ့ဆီဆိုဘဲ။
အခုလို ပြည်တွင်းမီဒီယာ ၊ ဂျာနယ်တွေကနေ ဖော်ပြလာတာ ကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲ … ။
ဒါပေမယ့်လည်း … တရုတ်ဈေးကွက်ကနေ မကောင်းကျောင်းပို့ဝင်လာတဲ့ … ကျွန်မတို့စားသောက်ကုန်တွေထဲ …. ဘယ်လောက်များရောပါခဲ့ပြီလဲနော် …. ။
သူများနိုင်ငံတွေကို အင်ပို့လုပ်လျှင် သူတို့က စစ်ဆေးမှု အဆင့်ဆင့်လုပ်ပြီးမှ passed ပေးတာ … ။ ဒီမှာရော … အဲ့ဒီလို အဆင့်ဆင့် လုပ်ကြလား မသိဘူး ။ ဒီနိုင်ငံတွင်းမှာ တချို့သော အသေးစား စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းလေးတွေ ဈေးကွက်ထဲ ဖြန့် ဖြူးနေတာ .. ဘာထောက်ခံချက် ဘာသက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မှ မပါဘူး ။ ပြည်တွင်းက ပရုတ်လုံးလေးတွေဖြစ်ပေမယ့် …. ဒီလို အစားနဲ့ပတ်သတ်တာမျိုးကျတော့ … အထိန်းအကွပ်မရှိဖြန့် ဖြူးနေလျှင် .. ဒုက္ခတွေများကုန်မှာ စိုးတယ် …
၀ှီး သာ့ဒ်ဝါးမှာ လူဖြစ်ရတာလဲ မလွယ်ထှာနော်။ ဟိုက ဂျောက်ချ ဒီက ထိုးချနဲ့ မျိုးမပြုတ်သေးတာကံကောင်း
ဂေဇက်ရဲ့ စီဂျေ ဆုန်သင်းတုံ.. လေးစားပါတယ်ဗျာ…
လုပ်တဲ့လူလည်း အံ့ပါရဲ့ ဘယ်လောက်ငတ်ငတ် ဒီလောက်တော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး…
စားဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ရောင်းဖို့ပဲလုပ်လုပ် မကောင်းတာ..
လုပ်သင့်တာလေးတွေ လုပ်ပေးနိုင်အောင် ဒီ Post ကို
etone ရေ တကယ့် သတင်းသမားစစ်စစ်ပါပဲ ချီးကျူးပါတယ် ….
ဓာတ်ပုံတောင် ရအောင်ရိုက်ပြီး တင်ပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် …
နောက်ဆို ဆီကြော်တွေတောင် ဝယ်မစားရမလိုဖြစ်နေပြီ …
လူတွေကလည်း ကိုယ့်အကျိုးစီးပွား တစ်ခုထဲကိုပဲ ကြည့်ပြီး လောဘစိတ်နဲ့
လုပ်သင့်လား မလုပ်သင့်လားဆိုတာတောင် မစဉ်းစားနိုင်တဲ့အထိ
အကျင့်စာရိတ္တတွေ ပျက်ပြားနေကျပါလားနော် ….
ခက်ပါ့လား …။ တစ်ခါကမန္တလေးမှာ နိုဗိုတယ်လ်က စားကျွင်းစားကျန်တွေစွန့်တာကိုလမ်းကနေဖြတ်ပြီး ၀က်ကျွေးဖို့ ၀ယ်ကျတယ်…။ တစ်ချို့ကောင်းတာ လူပါစားတယ်လို့ ပြောတယ်…။ နောက်ကျတော့ သိသွားလို့ ဟိုတယ်က လူပါလိုက်ပြီး သေချာစွန့်ပစ်စေတယ်လို့ ကြားဖူးတယ်….။ နယ်မှာကတော့ အဲဒိလိုပုံးတွေနဲ့ စားကကြွင်းစားကျန်တွေကို ၀က်စာအဖြစ်သယ်တာတော့ ရှိတယ်…။ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ထည့်စရာ တစ်ခုခုပေးထားရတယ်…။ အဲဒိအိမ်ရဲ့စွန့်ပစ်နိုင် မှု အပေါ်ကြည့်ပြီးနှစ်ရက်ခြား သုံးရက်ခြားလောက်သယ်ရတယ်…။ ၀က်စာအဖြစ်ပဲသုံးကြတယ်…။ နယ်မှာတော့ အိမ်တိုင်းလို ၀က်မွေးကြတာဆိုတော့ အစာရှားပါးပါတယ်…။ ၀က်မမွေးတဲ့ အိမ်က လိုက်တောင်းကျွေးကြတာပဲ…။